FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABRABULL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labrabull
Alika mifangaro mifangaro miady amin'ny Labrador Retriever / American Pit Bull Terrier
Ben the Labrador Retriever / Pitbull Terrier mifangaro amin'ny 15 volana
Ny alika Labrabull dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny American Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Momma amin'ny faha-2 taonany. Asakasak'izay Labrador sy tapany Bull bull . Nanavotra azy tao amin'ny Humane Society izahay sy ny vadiko. Momma dia alika mamy tokoa izay mifanerasera amin'ny alika sy saka !! '
Fangaro Moose the Pit Bull / Labrador (Labrabull) amin'ny faha-8 taonany
Boomer the Labrabull (Pitbull / Labrador mix) amin'ny 10 volana
Millie the Labrabull (Pitbull / Labrador mix) amin'ny 2 taona
Mifangaro Max ny Labrador Retriever / Pitbull amin'ny 1 taona
amerikana bulldog amerikana afangaro amin'ny boxer
'Titan ity, sarivongan'ny tokotaninay. Mpangaro Pit Pit / Lab fito taona izy ary zazakely lehibe indrindra hitanao! Tiany ny milalao miaraka amin'ny Care Bear mavokely ary mipetraka eo amoron'ny lavarangana fidirana mijery fiara sy olona mandalo. '
'Ny alikako dia Solo izy Pitbull / laboratoara afangaro, aseho eto amin'ny 1 taona. Nahazo azy aho fony izy 10 herinandro avy tany amin'ny toeram-pialokalofana nahaterahany.
- Tena milalao amin'ny angovo be
- manandrana misakaiza saika biby (saka, alika, androngo, bitro sns)
- sariaka be amin'ny olona sy ny ankizy ary ny be taona (mitsambikina kely rehefa tanora, nefa tsy mbola misy ankizy) - na dia malefaka be amin'ny zaza vao teraka sy ny zaza aza
- TIA ny rano sy ny lanezy
- tsy tsara amin'ny fiainana an-trano kely
- hitraka raha misy maheno amin'ny alina, na raha misy mandondona eo am-baravarana, fa tsy be mpibolisatra
- VOAZANA mora be, TIA manao fika amin'ny fitsaboana, mahay! (tsy dia misy olan'ny alika kely - nodiovina tao anatin'ny 2 andro)
- mandany vola normal
- fandeferana amin'ny fanaintainana mafy, ary matanjaka (ary Haingana!)
-Alika mpitsidika, tia mampihomehy anao
- lasa fiarovana ihany rehefa alika hafa no nanandrana niady tamin'i Jack Russell fa tsy ny fitiavany ny alika hafa rehetra.
- amin'ny 1 taona dia milanja 55 lbs izy.
- ny rahalahiny sy ny rahavaviny dia mainty, mainty sy fotsy, mainty, fotsy volo ary volontany
-mba be fitiavana, mampiseho ny fitiavana indrindra amin'ny tompony fa tsy ny olona rehetra. '
'Ity no namako akaiky indrindra Eli. Manodidina ny 9 volana eo amin'ity sary ity izy. Lab ny sokola ny reniny ary Pit Bull ny rainy. Tsy azoko antoka hoe avy aiza ireo sofina adala ireo, fa izy ireo no endrika mampiavaka azy. Eli dia nanao ahy ho Pit Bull-a-phobe teo aloha (eny, nataoko io fe-potoana io). Izaho dia iray tamin'ireo olona nanizingizina fa ny Pit Bulls dia natiora. Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana. Izaho dia nanana Lab mavo mavo, ilay alika 'fianakaviana' prototypical. Eli dia manana ny angovo Labrador angano, fahiratan-tsaina ary fitiavam-piainana, miaraka amina toetra mahafinaritra sy be fitiavana ary tsy fivadihana izay tsy nananan'ny alika 'fianakaviako' taloha. Mpiambina tsara koa izy — mailo ary ambonin-javatra rehefa misy olon-tsy fantatra, nefa hiala sasatra avy hatrany izy ary hiditra amin'ny fomba doggie tsara raha vao azony avy amiko fa tsy maninona ity olona ity. Tsy holaviko fa misy karazany marobe mahafinaritra any, fa rehefa anontaniana aho dia omeko ny Labrabull isaky ny mandeha. Tiany fanatanjahan-tena be dia be ary tia mandeha, indrindra rehefa azoko atao ny miala amin'ny tadiny mba hihazakazaka. Fehiny: Tsara indrindra ... Doggie ... Ever! '
Eli the Labrabull amin'ny maha alika kely azy
Buddy the Lab Pit amin'ny 18 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labrabull
Sary Labrabull 1
Sary Labrabull 2
Lisitry ny alika mitambatra Pit Bull Mix
griffon vendeen Petit Basset Mix
Alika kely pitbull 7 herinandro
olana ara-pahasalamana spaniel cocker merle
st Bernard volamena retriever mifangaro